Warshadda Biladaha Shiinaha ee jilicsan ee PVC iyo soosaarayaasha | SJJ
Billadaha waxaa mar walba loo adeegsadaa isboortiga, dugsiyada, xafladaha iyo xafladaha si loogu bixiyo abaalmarino, xusuus, dallacsiin iyo hadiyado. Iyadoo la tixgelinayo caafimaadka, bay'ada iyo faa'iidooyinka kale, ururo badan ayaa doorta biladaha PVC ee jilicsan halkii ay ka qaadan lahaayeen biladaha biraha ee caadiga ah.
Billadaha waxaa mar walba loo adeegsadaa isboortiga, dugsiyada, xafladaha iyo xafladaha si loogu bixiyo abaalmarino, xusuus, dallacsiin iyo hadiyado. Iyadoo la tixgelinayo caafimaadka, bay'ada iyo faa'iidooyinka kale, ururo badan ayaa doorta biladaha PVC ee jilicsan halkii ay ka qaadan lahaayeen biladaha biraha ee caadiga ah. Biladaha PVC ee jilicsan waxaa lagu sameeyaa walxo PVC ah oo jilicsan oo jilicsan oo khafiif ah, u wanaagsan bay'ada, ku fiican in lagu tilmaamo astaamaha faahfaahsan heerar midab leh oo dhalaalaya.
Biladahayaga jilicsan ee PVC mar walba waxaa loo sameeyaa si waafaqsan naqshadaha macmiilka. Calaamadaha waxaa lagu samayn karaa 2D ama 3D hal ama labada dhinacba, iyadoo midab la buuxiyey, la daabacay, geedi socodkii farsamada ee xardha laser iyo iwm. Iyada oo leh lifaaqyo kala duwan, biladaha PVC ee jilicsan ayaa lagu dhejin karaa xargaha ama baararka xargaha. Logos ma aha oo kaliya in la dul dhigo billadaha, laakiin sidoo kale xargaha ama baararka xargaha, si loo muujiyo waxyaabo badan oo loo xayeysiiyo summadahaaga iyo maaddooyinkaaga si ka wanaagsan.
Qalabka: PVC jilicsan
Ujeeddooyin: Dhimasho Dhimasho, 2D ama 3D, hal dhinac ama laba geesood ah, naqshaduhu waa la beddeli karaa.
Midabada: Waxay la jaanqaadi kartaa midabada PMS
Qaababka: Wareeg, afargeesle, ama qaabab kasta marka loo eego naqshadahaaga
Cabbirka: in ka yar 150 mm ama ku tiirsan naqshadahaaga
Dhammaystirka: Logos -ku wuxuu noqon karaa mid midabkiisu buuxo, la daabaco, la xardho ama la dejiyo, Laser
xardhan iyo wixii la mid ah
Xirxirida: 1pc/polybag, ama raac tilmaamahaaga.
Ma jiro xaddid MOQ
Hore: Dusha sare ee qalinka PVC
Xiga: Kuwo kale
Bilad La Habeeyey
Bilad leh Lanyard
biladda pvc ee jilicsan
Bilado leh Rhinestones
Billado leh Xadhig Ribbon Gaaban
Biladaha Isboortiga & Biladaha